Maxkamadda sare ee Kenya oo amartay in la joojiyo dib u celinta qaxootiga Soomaalida – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamadda sare ee Kenya oo amartay in la joojiyo dib u celinta qaxootiga Soomaalida
7th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Nairobi – Mareeg.com: Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa amar ku bixisay in la joojiyo dib u celinta qaxootiga Soomaalida, arrinkaas oo todobaadyadii tegay ay ku howlaneyd wasaaradda amniga gudaha Kenya.
Maxkamadda sare ee Kenaya ku amartay wasiirka arrimaha gudaha Kenya, Joseph Ole Lenku in uu joojiyo qorshaha dadka qaxootiga ah ee magaalooyinka jooga dib loogu celinayo xeryaha, ilaa laga dhageysanayo dacwad ay dad qaxooti ah soo gudbiyeen.
David Majanja oo ah garsooraha maxkamadda sare ee Kenya, ayaa soo saaray amarka, kaddib markii uu helay dacwad ay soo gudbiyeen 9 qof oo ka wakiil ah 500 oo qof oo qaxooti ah oo sheegay in ay maalgashi xooggan ka sameysteen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, ayna ku adagtahay iney dib ugu laabtaan xeryaha qaxootiga.
Dadka qaxootiga ah ee dacawadda u gudbiyey maxkadda sare ee Kenya ayaa caddeeyay in ay dowladda Kenya soo dhoweyn wanaagsan u sameysay sanadkii 2006, laguna boorriyay in ay maal-gashadaan Kenya.
Qaxootiga u dacwooday maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku doodaya in hirgelinta wareegto ka soo baxday Joseph Ole Lenku iyo sii socoshada howlgalka lagu magacaabay ‘Usalama Watch’ ay halis ku yihiin xuquuqda ay u leeyihiin in ay sameeyaan dhaqdhaqaaq iyo in ay lahaadaan hanti sida uu qabo dastuurka u yaalla Kenya.
Samow Muumin Maxamed oo ka mid ah dadka dacwadda gudbiyay ayaa tilmaamay in amarka dib-u-celinta dadka qaxootiga ah uu ka hor-imaanayo dastuurka Kenya, sharciyada ku saabsan qaxootiga iyo xeerarka caalamiga ah.
Dacwadda ayaa la dhageysan doonaa 27-ka bishaan May, iyadoo ay goobjoog noqon doonaan dhammaan dadka ay khuseyso.
Dhawaan ayay ganacsatada Soomaalida eek u sugan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxey qabsadeen qareeno u dooda, kadib markii dowladda Kenya raaf ku qaaday dadka Soomaalida ah oo qaar lagu celiyey Muqdisho, qaar kalana lagu celiyey xeryaha qaxootiga iyagoo aan raalli ka heyn.
Cali Khaliif iyo Saleymaan Xaglatoosiye ku loolmaya Buuhoodle
Raysul Wasaare Cabdiweli Sheekh oo maanta gaaray magaalada Marko